Amagama aphambili, uMxholo wokuQhubeka kunye ne-SEO
Ukubaluleka koMxholo oMtsha we-SEO
NgoLwesine, Novemba 10, 2011 NgoLwesine, Julayi 18, 2013 Douglas Karr
Ndibaxelele abantu ixesha elide ukuba i-adage yakudala yokuthengisa isebenza nakwisiqulatho, nayo. Ukufika kwakhona, rhoqo kunye nexabiso lomxholo kubalulekile. Kungenxa yoko le nto kubloga isitshixo sesicwangciso sentengiso somxholo… ikuvumela ukuba ubhale rhoqo. Ishati engezantsi ivela komnye wabathengi bethu. Silungiselele indawo yabo kwaye, ngokudityaniswa nokwenyuselwa ngaphandle kwesiza, batsibela kwiindawo ezithile ezikhuphisana kakhulu.
Nangona kunjalo, emva kweenyanga ezininzi ukufumana umxholo omtsha kwiindidi zamagama aphambili kwakunzima. Iqela elibhala umxholo lixakeke kakhulu ke sibaqeshele umbhali womxholo. Ngelixa inkampani yayijolise kwimveliso kunye neendaba, umbhali wethu wokukhuphela wagxila kwiingcebiso ngokubanzi kunye neendlela ezilungileyo zeshishini. Sibonelele nje ngezihloko ezininzi ngamagama aphambili angafumaneki, kwaye yiya!
Itshathi isuka Semrush, ethi ibambe iindawo eziphezulu kwizikhundla ezingama-60 ezigidi kumagama aphambili. Ayisiyiyo le kuphela iklayenti eyonyusa inani lamagama aphambili usezingeni, bakwaphucule nenqanaba labo lilonke. Sukuvumela indawo yakho ukuba yonakale ngomxholo.
Ukubonelela ngesiqulatho samva nje, esixhaphakileyo nesinexabiso aziyi kuqhuba nje undwendwela, iyakunceda nakwinjini yakho yokukhangela!
tags: UkuThengiswa kweMpahlaamagamaenjini yokukhangela nounSEO
UGoogle xa kuthelekiswa noFacebook wabucala
Ukwamkelwa komSebenzi ngokuSebenzisa uMntu
Novemba 10, 2011 ngo-5: 51 PM
UDoug, kulungile, ngaba yayingumxholo othe ngqo wakhulisa iimetrikhi zabo, okanye iintshukumo ezenziwa ngabantu xa bebona umxholo? Ndibuyiselwe kwinyani yiposti yakho "yeNani leMicimbi" (https://martech.zone/numbers-matter/ ). 😉 UYohane
Novemba 10, 2011 ngo-5: 54 PM
Kule meko, babengenawo umxholo kwamanye amagama aphambili ekufanele ukuba babekwe kuwo. Ngamafutshane, awungekhe ubeke indibaniselwano yamagama aphambili ngaphandle kokuba namaphepha awakhankanyayo! 🙂